အင်တာမီလန် နည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ကွန်တီ – MySport Myanmar
အင်တာမီလန် နည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ကွန်တီ
အင်တာမီလန် အသင်းနည်းပြ ကွန်တီ ကတော့ အကယ်၍သာ သူ့အနေနဲ့ ခရစ်စမတ် မတိုင်ခင် အသင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရရင် အဲ့ဒါက သူ့အနေနဲ့ မထိုက်တန်လို့ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၄ ) မှာတော့ အင်တာ မီလန် အသင်းက ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာပဲ ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ရှုံးပွဲကြောင့် အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ဘီ မှာ လေးပွဲကစားပြီး နှစ်မှတ်သာ ရရှိထားတာကြောင့် အုပ်စုရဲ့ အဆင့် ၄ နေရာမှာ ရှိနေပြီးတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ရဖို့ သေချာနေတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ သာမကပဲ စီးရီးအေ အမှတ်ပေးဇယားမှာပါ ၈ ပွဲကစားထားအပြီး ရမှတ် ၁၅ မှတ် နဲ့ ဇယားရဲ့ အဆင့် ၅ နေရာမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
Photo Credit: Calcio Mercato
ဇယားရဲ့ ထိပ်ဆုံးက အေစီ မီလန် အသင်းနဲ့ ရမှတ် ၅ မှတ် အကွာနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အန်တိုနီရို ကွန်တီ ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် အပြီးမှာတော့ အသင်းကနေ ထုတ်ပယ် ခံရဖို့ နီးစပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တီ ဟာ အင်တာ မီလန် အသင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့က စတင် ကိုင်တွယ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အသင်းနဲ့ အတူ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှုတွေ ရှာဖွေ မထားနိုင်သေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တီ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း သတင်းစာဌာန တွေက မေးခွန်း ထုတ်မှုတွေ ရှိနေသလို ဒီနေ့မှာလည်း သရော်တဲ့ အစီအစဉ်ရှိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စတစ်ရှား လာ နို့တီဇီရာ ကနေပြီးတော့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ တီပီရို ဒိုအောရို လို့ အမည်ရတဲ့ ရွှေရောင်ကြံ့ ဆုဖလားကို ဆုချပေးခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာမီဒီယာ တွေ အနေနဲ့ ကွန်တီကို အသင်းနဲ့အတူ ပန်နာတိုနာ ကိတ်မုန့်ကို စားနိုင်မလားဆိုပြီး မေးခဲ့ပါတယ်။ ပမ်နာတိုနာ ကိတ်ဆိုတာကတော့ အင်တာမီလန်က အစပြုတဲ့ ကိတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီးတော့ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သူကူး ပွဲတွေမှာသာ စားသုံးလေးရှိကြတဲ့ အောင်ပွဲခံတဲ့ကိတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တီကို အဲ့ဒီ ကိတ်စားနိုင်မလားဆိုပြီး မေးခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ ခရစ်စမတ် ပွဲတော်မှာ အသင်းနဲ့ အတူ ရှိနေနိုင်လောက်လား ? ဒါမှမဟုတ် အသင်းကနေ ထုတ်ပယ် ခံနိုင်ရလောက်လား ? ဆိုပြီး မေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တီ ကတော့ အဆိုပါ မေးခွန်းအပေါ် အခုလိုပဲ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အများကြီး ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်သာ အသင်းနဲ့ အတူ ပန်နာတိုနာ ကိတ်ကို မစားနိုင်ခဲ့ရင် အဲ့ဒါက‌ ကျွန်တော် မထိုက်တန် လို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အသင်းအနေနဲ့ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေလားဆိုပြီး မေးခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ “ အဲ့ဒါက ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းပဲ ” လို့ ပြန်လည် ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-11-27T13:43:02+06:30November 27th, 2020|Champions League, Football, Serie A|